सुनको भाउ घट्यो : तोलाको कति पुग्यो ?
काठमाडौं। नेपाली बजारमा आज बुधबार सुनको भाउ घटेको छ। सुनको भाउ आज तोलामा ५ सय रुपैयाँले घटेको हो। हिजो सुनको भाउ तोलामा १६ सय रुपैयाँले घटेको थियो।
नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा ९१ हजार ८ सय रुपैयाँ तोकिएको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अहिले सुनको मूल्य घट्नु र बढ्नुको खास कारण छैन। तर, पनि भाउमा उतारचढाव आइरहेको छ।
अमेरिकाको केन्द्रीय बैंकको अध्यक्षमा जेरोम पावेल दोहोरिने भए पछि त्यसको प्रभाव सुनमा परेको हुन सक्ने महासंघको अनुमान छ। संकटमा परेको अर्थतन्त्र उकास्न पावेले लिएको रणनीतिको असर सुनमा परेको हुन सक्ने महासंघले जनाएको छ।
यस्तै, आज चाँदीको भाउ पनि घटेको छ। हिजो तोलामा १२ सय ५५ रुपैयाँ रहेको चाँदी आज १२ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भइको छ। हरेक दिन बिहान १० बजेको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यअनुसार नेपाली बजारमा पनि सुनचाँदीको मूल्य निर्धारण हुने गरेको छ।
नेप्सेमा ५३ अङ्ककाे गिरावट
आज सुनचाँदीको भाउ घट्यो : कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
नेपालीले नदेखेको सुन ‘बिटक्वाइन’ : कसरी हुन्छ कारोबार ?